Tani waxay noqon kartaa sababta ugu dhakhsaha badan Apple Silicon | Waxaan ka socdaa mac
Tani waxay noqon kartaa sababta ugu dhakhsaha badan ee Apple Silicon
Mid ka mid ah riwaayadihii waaweynaa ee WWDC-dii ugu dambeysay wuxuu ahaa ku dhawaaqistii uu sameeyay agaasimaha guud ee Apple oo ku saabsan macsalaameynta lamaanihiisa 15-kii sano ee la soo dhaafay, Intel. Cook wuxuu sheegay inuu doonayo isbedelka lagu sameeyo laba sano gudahood. Kuwani "rush" si ay u bilaabaan Apple Silicon, waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay Darajooyinka xun ee Skylake.
Xantaas ayaa run ka noqotay WWDC markii Tim Cook uu ku dhawaaqay in Apple ay u haajireyso processor-yo cusub. Laakiin layaabku wuxuu ahaa mid weyn, wax walbana, maxaa yeelay midkeenna kama fileynin, inuu taas ku dhawaaqi doono waxaa lagu sameyn lahaa qiyaastii laba sano. Tufaax ayaa ka baxday Intel iyo Midkani wuxuu xaqiijiyay inay weli jiraan wax la gubo.
Waxa ugu yaabka badan ayaa ah in lagu sameeyo waqtigaas oo hada waxaan uheysan karnaa sababtaan "ku deg degno" Apple. Warbixin ayaa ka hadlaysa tayada liidata ee Intel's Skylake chips. Ikhtiyaar aysan Apple awoodi karin in uu ku tartamo adduunkan la tartamayo iyo gaar ahaan qiimaha loo dejiyay Mac-yada hadda jira.
Francois Piednol, Injineerkii hore ee Intel ayaa wareysiga ku sheegay:
Hubinta tayada Skylake waxay ka badneyd dhibaato. Waxay ahayd wax aan caadi ahayn. Asal ahaan asxaabteena Apple waxay noqdeen dhibaatada koowaad ee dhismaha. Taasina waxay ahayd mid aad iyo aad u xun.
Tani waa halka ay ku yaalliin ragga ku jira Apple ee had iyo jeer ka fekerayay inay beddelaan, way tageen, eegeen oo dhaheen,Waa hagaag waxaynu u baahanahay". Asal ahaan Skylake hubintiisa tayada liidata ayaa ka mas'uul ah iyaga runti inay ka baxaan madal.
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, dhamaadka sanadkan waxaan horey uheli doonnaa Mac kii ugu horreeyay oo ay la socoto Apple Silicon. Waxay u badan tahay inuu yahay 24-inji iMac ama wax kale, laakiin waxa iska cad ayaa ah in tahriibkan aan mar dambe la joojin doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tani waxay noqon kartaa sababta ugu dhakhsaha badan ee Apple Silicon
Haddana waxaan ku arki karnay naqshad cusub kumbuyuutarrada 'MacBook'
La bilaabay nooca 109 ee Sahanka Teknolojiyada Safari